diyaaradaha aan duubnayn ee aan muujinayn maqaarka ka baxsan sida Matin Marauder oo keliya ayaa muujinaya inne
diyaaradaha aan duubnayn ee aan muujinayn maqaarka ka baxsan sida Matin Marauder oo keliya ayaa muujinaya inne sano 2 4 bilood ka hor #965
Marka aan soo dejiyo diyaaradaha qaarkood ie Martin Marauder C47 Boeing Superfotress kaliya waxaan helaa shaqooyinka gudaha gudaha ee diyaarada
diyaaradaha aan duubnayn ee aan muujinayn maqaarka ka baxsan sida Matin Marauder oo keliya ayaa muujinaya inne sano 2 4 bilood ka hor #966
Ma socotaa DX9 ama DX10? Ma ordaaya FSX Steam ama Boxed? Haddii Boxed aad la ordaysid or dardar la'aan? Noocee daaqadaha aad leedahay
diyaaradaha aan duubnayn ee aan muujinayn maqaarka ka baxsan sida Matin Marauder oo keliya ayaa muujinaya inne sano 2 4 bilood ka hor #967
Waxaan ku socdaa DX11 daaqadaha 7 xirfadle ah oo leh nooc toos ah oo ah FSX. Waxaan hadda hawlgab noqday oo waxaan ku soo noqonayaa duulimaadki sims ka dib sannado ka dib markaa waxaan ahay xoogaa jahwareer leh. Laakiin waxaan u arkaa degelkan inuu yahay mid cajiib ah oo inta badan soo-dejintuna ay u muuqdaan inay si fiican u shaqeeyaan. Nasiib xumo waa kuwa aad runtii jeceshahay
diyaaradaha aan duubnayn ee aan muujinayn maqaarka ka baxsan sida Matin Marauder oo keliya ayaa muujinaya inne sano 2 4 bilood ka hor #968
Mar labaad salaaman ...FSX Liiska xulashooyinkaagu wuxuu ku ordi karaa midkood DX9 ama DX10 Hordhac / Goorma FSX waxaa la sameeyay, waxyar ka hor siideynta DX10, laakiin waxay ku socotaa DX9 sida caadiga ah. Tag boggaaga xulashooyinka oo hubi in sanduuqa dulmarinta 'DX10' aan la hubin. Diyaaradaha Rikooo dhammaantood waxay ku shaqeeyaan DX9 si caadi ah. Qaarkood waa DX10 is waafiqsan haddii ay yihiin waxay ku jiri doonaan tilmaanta. Waxaa jira naqshad shaashad bixin ah oo la heli karo si loo saxo aragtida DX10, laakiin haddii aadan iibsaneyn barnaamijkaas, waxaa fiican inaad socodsiiso FSX DX9. Xulashada saxda ah ee 'DX10' si sax ah uma shaqeyneyso, waxayna saameyn ku yeelanaysaa qaab dhismeedka jirka. Windows 7 waa goob xasiloon oo loogu talagalay FSX taasina waa waxaan u adeegsadaa jilitaanka duulimaadka. Hada waxaad dhahdaa waxaad waddaa nooc toosan oo ah FSX. Haddii aan fahamsanahay xuquuqdan waxay la micno tahay inaad leedahay mid ka mid ah daabacaadihii ugu horreeyay ee la sii daayay, ama nooca loo yaqaan 'Deluxe'. Haddii taasi dhacdo waa inaad ubaahantahay SP1 iyo SP2, ama Dardargelinta waa in lagu daraa. Taas la'aanteed, inta badan qalabka bilaashka ah iyo qalabka wax lagu kala iibsado waxay lahaan doonaan arrimo qoraal ah. Waxaan hayaa FSX Daabacaadda dahabiga ah oo la socota dardargelinta diskka. Waxay u badan tahay inaad ogaan doonto inaad mooto inta aadan calaamadayn sanduuqa DX10 ee horudhaca ah markii aad barnaamijkan xallisay, dhibaatadu waa taas FSX lama cusboonaysiin xirmada adeegga loo baahan yahay. I ogeysii… Thanks
diyaaradaha aan duubnayn ee aan muujinayn maqaarka ka baxsan sida Matin Marauder oo keliya ayaa muujinaya inne sano 2 4 bilood ka hor #971
Fikrad fiican !! Waad ku mahadsantihiin taladaada iyo hanuunintaada nooca badan. La soo dejiyey SP 1 & SP2 sida aad soo jeedisay waxay u muuqataa inay shaqeyneyso hadda. Waad ku mahadsan tahay markale.
diyaaradaha aan duubnayn ee aan muujinayn maqaarka ka baxsan sida Matin Marauder oo keliya ayaa muujinaya inne sano 2 4 bilood ka hor #972
Taasi waa sababta aan halkan u joogno, si aan midba midka kale ugu raaxeysto hiwaayadeena,
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: robtho
diyaaradaha aan duubnayn ee aan muujinayn maqaarka ka baxsan sida Matin Marauder oo keliya ayaa muujinaya inne sano 2 4 bilood ka hor #974
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.260